बादलबिना ओली सरकार चल्छ ?
ओली सरकारका गृहमन्त्री माननीय राम बहादुर थापाको बारेमा अहिले सर्वत्र चर्चा छ । जनयुद्धकालमा ‘बादल’ उपनामले चर्चित माओवादी नेता थापा नेपाली राजनीतिमा स्वच्छ छवि बनाएका एक इमान्दार, मेहेनती र जनप्रिय नेता हुन् । हक्की स्वभाव, कम बोल्ने तर बोलेको काम गरेर देखाउने गृहमन्त्री थापालाई बेला बेलामा ‘मीडियामैत्री’ नभएको आरोप पनि लाग्ने गर्छ । गृहमन्त्री बनेपछि यसअघि कसैले आँट गर्न नसकेको काम गरेर एकाएक चर्चा कमाएका बादललाई फेरि मीडियाकर्मीले ‘सुनियोजित’ रुपमै एकपछि अर्को गर्दै किन विवादित बनाउन खोज्दै छन् ? जनतामाझ भ्रम सिर्जना गरेर बादललाई असफल गृहमन्त्रीको पगरी भिराउँदै गरेको यस अवस्थामा देशको राजनीति कतातिर गएको सङ्केत हुन्छ ? यो लेख यसैमा केन्द्रित छ ।